Tag: Mumhanzi microdata | Martech Zone
Tag: Mumhanzi microdata
Ndine urombo nekunonoka kumhanya pane izvi! Isu takatumira runyorwa rwezvakanyorwa kuna Ade pamwe nekupinda kwega kwega kuve nenhamba yakasarudzika inosanganisirwa (uchishandisa iyo RAND basa muExcel uyezve nekugadzirisa iyo ikholamu). Isu takabva taita kuti Hannes asarudze yakasarudzika nhamba mukati memazana gumi neshanu zvinyorwa kuti Hannes asazive kuti ndiani anokunda angave ani. Iye akahwina iyo $ 108 yekupa aive Noah pa wpstar.com! Kuvhara iyo Paypal transaction mutengo, ini chaizvo